DEG DEG: Shir ka dhan ah faragelinta Ciidanka Itoobiya ee Galmudug oo ka socda Muqdisho | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA DEG DEG: Shir ka dhan ah faragelinta Ciidanka Itoobiya ee Galmudug oo...
DEG DEG: Shir ka dhan ah faragelinta Ciidanka Itoobiya ee Galmudug oo ka socda Muqdisho
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo Xildhibaanada labada Aqal ee ka soo jeeda Galmudug ayaa shir ay kaga hadlayaan xaaladda Galmudug iyo falcelinta Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
Shirka oo jawi aan muuqan uga socda mid ka mid ah Hotelada Muqdisho ayaa diirada lagu saarayaa in laga hortago qalalaaso ka dhasha dhaq dhaqaaqa Dowladda ay ku wajaheyso dhismaha maamulka Galmudug iyo waliba faragelinta ciidanka Itoobiya ku sameynayaan doorashada la filayo iney dhawaan dhacdo.
Shirka oo ay goob joog yihiin Xildhibaan Fiqi iyo Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa la filayaa in war cad oo ku saabsan xaaladda Galmudug laga soo saaro.
Inta badan dhinacyada dhaliilsan Hoggaanka Villa Soomaaliya ayaan bogaadin waxa ka socda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyo ciidanka Dowladda Federaalka Itoobiya ee magaalada gaaray,kuwaas oo fariisimo ka sameystay xarumaha ugu muhiimsan magaalada Dhuusamareeb.
Dowladda Federaalka ayaa maalmo hakisay howlaha dhismaha maamulka Galmudug ka dib markii ay tabasho badan ka dib,waxaana maalmahaas hakadka jiro lagu xalinayaa dhammaan khilaafyada jira.